Mai Chibwe VekwaZimuto: Kuzvibatabata iwe une murume/mukadzi
Iyi inyaya inoshungurdza vanhu vakawanda kana akawana murume/mukadzi wake achizvifadza pamberi iye aripo. Ndinonyoregwa tsamba dzakawanda chose zvikuru nevakadzi vachibvunza kuti vatadzeiko kuti murume azvifadze ega iye mukadzi wake aripo uye asingamurambiri. Isu vakkadzi tinoona sokuti nyaya dzese dzokuvatana nomurume tisu tinofanira kudzigadzirisa mumba. Vazhinji vedu tikangofunga kuti murume mukadzi anokwanisa kuva ne INDEPENDENCE panyaya yerhoji, zvinovhundusa.
Ndakabvunza varume vakawanda ndikapihwa mhinduro dzakawanda asi zvinoita sokuti pane nyaya mbirii apa:
Kunoti nyaya yekuti chawajaira kuita unoramba uchiita. Murume akajaira kuzvigutsa mazuva aange asina mukadzi, acharamba achingozviita chero ava nomukadzi. Hazvirevi kutimukadzi haasi kugona basa kwete asi kuti iye murume ari kungoitawo chinhu change ajaira kuita ega. Hazviti kutimukangoroorana obva atorega kuzvifadza. Anotora nguva pamwe gore rese kana kupfuurra.
Kozitizve varume vakawanda vakapindura vanoti ivo kunaka kwacho kwakasiyana nokunaka kwemukadzi. Kwahi zvinongoitika kuti umwe musi unongodawo kusiyanisa manakire acho wobva waita wega nemaoko.
Iwe mukadzi ukawana murume wako achiita ega iwe urimo mumba, toti apinda mubathroom oita iwe womuwana achiita ega. Chokutanga usamutsamwira kana kumupopotera kana kumufungira zvakaipa. Mubvunze kuti anoda here kuti ujoine zviitwa izvi? Kana ati joina iwe chibvisa bhurugwa ujoine. Kana achida kuti uite nemaoko ita nemaoko. Chimwe chinhu chinofanira kuti munhukadzi wese awane mukana wekuona kuona urume huchibuda muchombo nokuona zvinoita kumeso kwemurume wako achidaro. Zvinoita kuti upe rukudzo pamunozovatana makatarisana paunoona kumeso kwake kodaro uchiziva kuti ari kukupa urume.
Mapedza usataridza kugumbuka nazvo zvachose. Itomuudza uti zvange zvichinaka kana kunakidza kuona uye dai akuratidzazve umwe musi. Musi waunoenda kumwedzi ukamuti uya ndikuite nemaoko haarambi.
Kozoti yave imwe nguva muudze kuti kana achida kuvatana chero paadira please ngaakuudze haurambi kuiswa chero zvodii. Unomuudza rimwe vara rokutaura rinokuyeuchidza kuti oda zverhoji. Akangohwisisa chete kuti iwe unoda zvinomupa confidence yokukuudza. Vara raunomupa rinofanira kuva vara risinganetsi kutaura, uye risingasvodesi. Unokwanisa kuva mubvunzo kana vara kana chimwe chokutaura chete ava nezemo achida kuvatana newe. Anokwanisa kuti:
Ndipewozve mvura negirazi guru
Wamboona mumvuri here nhasi?
Iwe ingomuudza zvaunoda kuti ataure kana achida rhoji isiri nguva yokuvata.
Kana murume abatwa nehope aguta rhoji, cheroimba ikatsva haamuki. Saka mukadzi akaterera kufema kwemurume akaziva kuti avata, anotanga kuzvibatabata kusvika aguta, murume haamuki. Varume vanofunga kuti mukadzi anogutsva nokupinzwa chombo.Chombo ndicho hacho asi kuzvifadza kunowanzoitwa nokukwizirira bhinzi. Hapana chinopinzwa muchitubu.
Izvi zvinoreva kuti murume akatadza kugutsa mukadzi nechombo, anokwanisa kumukwizirira panyama dzakatenderedza bhinzi kusvika agutawo. Hwisisai apa varume nokuti ukataridza kufarira bhinzi yomukadzi wako zvakangofananawo nomukadzi anofarira chombo chomurume wake. Unopiwa rukudzo mumba nenyaya yechinhu chidikidiki. Usati wabatwa nehope, tora 5 minutes yokupedzisa mukadzi wako wawatanga nechombo.
Zvinorevazve kuti unofanira kukurudzira mukadzi akuratidze kuti iye ega anokwiza sei panhu apa. Adaro iwe chipurakitiza uchiongorora REACTION yake pakunakigwa. Ziva kugara usina nzara dzakareba, uye kujaira kuzora mafuta mumaoko kana monovata. Maoko ngaaitewo kunyorovera, kwete kuomarara segashu.
Kana uri mukadzi akambodhonza matinji unotoziva kuti kuzvibatabata kunowanda pamunhukadzi. Zvino kana wawanikwa panoita nguva dzokuti unozvibatabata kuti zemo ripere. Kana une murume anokukasirira obva abatwa nehope. Kazhinji unoti avata iwe zemo rakangozara, wozvipedzisa wega. Vakawanda vanhukadzi vanodaro munyika dzese. Zvinobva nokuti murume wako munhu akatsvangamuka here kana kwete. Murume anofanira kukupedzesa iye pachake asi dzimwe nguva hazviiti saka unomirira obatwa nehope wozvipedzisa wega. Kumirira hope dzake kuti asafunga kuti haagoni rhoji nokuti anotozowedzera kusagona kana zvadaro.
Kozotizve kana murume asipo mukadzi anokwanisa kuzvibatsira kana zemo rabata. Mukadzi anogona kuzvibatsira kusvika zemo rapera munhu anoti akavata nomurume anokasirawo kusvika pokupedzisira kunakigwa.
Iwe murume ukawana mukadzi wako achizvibatsira usatanga kufunga kumutuka kana kupopota. Kana wada kumubatsira mubatsire asi ukamutuka zvoreva kuti paachada kuzviita futi anokiya gonhi. Munhu akachenjera anoona kuti umwe wake iri kuzvibatsira haamuudzi kuti akanganisa kana kuti aita chinhu chausingadi kuti aite. Munhu akachenjera anokurudzira umwe wake kuti amutaridze kuti zvinoitwa sei kuti kana omubatsira azive zvokuita. Umwe noumwe ane maitire aanoita ega saka ukazvibata izvozvo wawana mukana wekumubatsira kunakira mukadzi wako.
Tese ngatihwisise kuti pane nguva yokuti umwe wako anoda kuzvinakidza ega. Isa RESPECT ipapo usatanga kuita BP nazvo wofonera shamwari dzako kufumura mukadzi/murume wako. Kana uchida kujekesegwa bvunza akuudze, usapopotedzana naye uye usamupa GUILT TRIP. Muudze kuti chero paadira iwe uripo kumupa asi kana akada kuzvibatsira hauna chinokunetsa nazvo.
NYAYA INONETSA Mumba
Chinowanzonetsa mumba ndechokuti umwe worambira umwe. Toti mukadzi ari kuda kuvata nomurume, murume orambira mukadzi, Mukadzi wozowana murume achizvibatsira ega. Zvinogwadza moyo kuziva kuti uku haadi kuvata newe uku ari kuda rhoji. Hwisisa kuti ukaputsa TRUST yange yavapo yaita makore akawanda uchiivaka zvinozokunetsa kuidzosea. Kana warambira umwe, chinova chinhu chakaipa pakati penyu, chirega kuda kuzvibatsira wega paunokwanisa kuonekwa uchizviita.
Mukadziwo akawana murume achizvibatsira, ngaatende kuti murume ari kudaro mumba pane kufonera mahure. ukada kupopota wava kutoudza munhu kuti musi waasingakudi ngaende kumwe anoita kure kwausingamuoni. Kuitira pawunoona kuti uhwisise kuti akakugumbukira, sezvaunoitawo iwe kana wakagumbuka. Rega apedza zvaari kuita womurega ovata, Mangwana ndipo paunokumbira nguva yokutaurirana nyaya yacho. pakutaurirana usataura nezvekuti wakamuona achizvibatsira. ingotaura nezvenyaya yamakapokana nayo muigadzirise. Madaro pakunovata kumbira kuti muvate mese.
Murumwewo ukapepuka ukawana mukadzi wako achifemereka achizvibatsira achifunga kuti uvete, ramba uvete apedze zvaanoda kupedza kuti akasirewo kuvata. Kana mange mamboita zvinoreva kuti wanga wamukasirira ukabatwa nehope iye asina kuguta. Kana mange musna kuita, zvinoreva kuti ange ane zemo asi iwe wabatwa nehope musina chamaita.
Mangwana usamubvunza nazvo, Ingoziva kuti pamuchada kuitazve, womuwanzira maminutsi uri mukati make. Kana zvaramba mubvunze kuti ungamubatsira sei uye mupe mvumo yokuzvibatsira iwewo uchimukisa nokumumwa mazamu, nokukurudzira nokutaura zvinofadza muzheve. Rega muridzi azvibate pabhinzi yake nokuti anoziva zvinokasira. iwe sapota chete.
Nyaya iyi inokasira kuhwisiswa kana mese maratidzana kuti kuzvibatsira kunoitwa sei. Kana waratidzwa ratidzawo kufara nazvo uye kumbira kupurakitiza paari nemaoko. Mukadzi haanetseki kushandisa maoko pamurume zvinova zvinobatsira kana uri kumwedzi. murume haaregi zemo achiti nokuti uri kumwedzi.
Murume anoti netsei kudzidzisa kubatsira mukadzi nemaoko.Zvinoda patience kwamuri mese. Usafunga kuti murume anozvikwanisa wamuratidza kamwe chete. Asi murume akachenjera akaratidzwa anozviita musi waanoona akasirira mukadzi wake. Kushandisa maoko pamukadzi wako kunoda munhu akapfava hana. Ndosaka tichiti zviiite kana muchiri kutanga kutamba kana kuti mapedza mukadzi asina kuguta. Pamwe murume anobva atozomira chombo futi mobva mapinzana zvakare moita nguva muchikoirana. Hakuna mukadzi anoda kuvata asina kuguta.
Chokwadi ndechokuti zvese zvokushandisa maoko zvinoda kuwanzwa muchiri kutamba mese kuti zemo rikwire mumuviri. Murume ukapinza chigumwe mumukadzi ukakwenyerera kuno kumusoro pamwe panoita sepakazvimbirira mukati imomo uku uchikisa mukadzi nokumuwanzira kufemereka kuratidza kuti une zemo, nokunanzva mutsiba, mazamu, minyatso, zheve, uchidaro, uchaona wega kuti munhu anyorova uye matinji azvimba, minyatso yamira, kufema kwasiyana. Ukapinzwa chigumwe mukati, wega unongowedzera kuvhura makumbo kuti murume awedzere zvaari kuita. Ukarerisa muviri ipapo unotohwa chiuno chega choda kufambafamba. Rega murume ahwisise zviri mukatimako, pamwe kutomupatsanurira matinji nemaoko akokuti anyatsoona zvaari kuita.
Murumewo pakuzopinza, usangoda kupinza, ita zvokutanga wambonyemudza mukadzi chombo. Bvunza kuti ava kuda kupinzwa here sokuti hauzivi kuti ane zemo. Tora nguva uchimunyemudza. Zvinobhowa kunyemudzwa asi zvinokwidza zemo.
Mukadziwo kana ukahwisisa kuti murume wako anokukasirira wana mukana wekumudzidzisa kushandisa maoko muchiri kutamba kuti iwe ufanova mberi kwake. Pamunozopinzana chombo iwewo hauchanonoki. kana murume agara ajaira kukushandisira maoko, hazvimunetsi kuhwisisa kana wada kuti awedzere.
Vanhu vanoitana nemaoko vanhu vanowirirana pamoyo.
Posted by Mai E Chibwe at 07:07